August 2019 - POPPIN NEW
ရည်းစားအယောက် ၂၂၀ ထားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ခွေးနဲ့ပဲ လက်ထက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားမော်ဒယ်
Pop Pin New August 13, 2019
ရေကူးဝတ်စုံမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ Elizabeth Hoad ဟာအချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့အမြဲထာဝရအတွက်လက်တွဲဖော်ကိုရှာမတွေ့ခင်မှာ ယောကျာ်းအယောက် ၂၂၀ နဲ့ တွဲခဲ့ဖူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးတွေ တချို့နဲ့လည်းတွဲဖူးတာဖြစ်ပေမဲ့လည်း ဒီရည်းစားတွေထဲမှာလက်တွဲဖော်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့အသက် ၄၉ နှစ်မှာတော့ လက်ထက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့အချစ်စစ်ကတော့ တခြားသူမဟုတ်ပဲ သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွေးလေး Logan ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမခွေးလေးနဲ့လက်ထက်ပွဲဟာ တခြားလက်ထက်ပွဲတွေလိုပဲအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Elizabeth Hoad ဟာ အဖြူရောင်သတို့သမီးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့လက်ထက်ပွဲကို တီဗီထုတ်လွှင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၈ နှစ်အတွင်း ရည်းစားရှာပေးတဲ့ဆိုဒ် …
ကျန်းမာရေးအတွက် ဤစာကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါနော်​
ကျန်းမာရေးအတွက် ဤစာကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါနော်​ သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကို …..သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို …..ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။( သကြားကို မထည့်ပါနဲ့ ) ပူနေတဲ့…..သံပယိုရေနွေးဟာ အေးနေတဲ့ …..သံပယိုရည်ထက်ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ကဇွန်းဥ ….အဝါနဲ့ခရမ်းရောင်တို့မှာလည်း ကင်ဆာကို ….ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာကောင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁။ ညနှောင်းပိုင်း ….အစားအစာစားခြင်းဟာအစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ်။ ၂။ တပတ်တွင် ကြက်ဥ၄လုံးထက်ပို၍ …
ရေ​ဘေးအန္တရာယ်​ရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်​ငံ၊ Karnataka ပြည်​နယ်မှာ ဒုက္ခ​တွေကြားထဲကပဲ ထူးခြားဖြစ်​စဉ်​တစ်​ခု ရှိခဲ့ပါတယ်​။ ပြည်​နယ်​မှာ ​ရေလွှမ်းမိုး​မှု​ကြောင့်​ ​နေအိမ်​​တွေ​ဟာ ​ရေထဲစုန်းစုန်းမြုပ်​ကုန်​ပြီး ​အိမ်​​ခေါင်​မိုး​တွေကိုသာ မြင်​ရ​တော့တဲ့ အ​ခြေအ​နေပါ။ ဒီထဲက ​နေအိမ်​တစ်​လုံး​ရဲ့ ​ခေါင်​မိုး​ပေါ်မှာ​တော့ မိ​​ကျောင်းကြီးတစ်​​ကောင် ထီးထီးကြီး တင်​​​လာတာကို အံ့အားသင်​ဖွယ်​ရာမြင်​​တွေ့ခဲ့ရပြီး ဒီမြင်​ကွင်းကို အစအဆုံးမှတ်​တမ်းယူရိုက်​ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်​ဟာ လူ​​တွေရဲ့အမိုက်​စား​ထောက်​ခံအား​ပေးမှု​တွေ​ကြောင့်​ လူမှုကွန်​ရက်​မှာ ​ကျော်​ကြားလို့​နေပါတယ်​။ အိမ်​​ခေါင်​မိုး​ပေါ် မိ​ကျောင်းကြီးမတင်​ခင်​၊ …
အမေအိုရဲ့ မျက်ရည်ကြားက အသက်​​မဲ့​နေ​သော ဖုန်း
အသက်​​မဲ့​နေ​သော ဖုန်း အဖွားအို တစ်​​ယောက်​က သူ့ရဲ့ ဖုန်း​လေးကို… ဖုန်းပြင်​တဲ့ဆိုင်​မှာ သွားပြတယ်​… ပြင်​​ပေးတဲ့ သူက စစ်​​ဆေး ကြည့်​လိုက်​ပြီး ဒီဖုန်းက​ကောင်းပါတယ်​… ဘာမှမပျက်​စီး​သေးဘူး ​ခေါ်လို့လဲရပါတယ်​…. အဖွား မျက်​လုံးထဲမှာ မျက်​ရည်​အပြည့်​နဲ့… ဒါဆို အဖွား သား၊သမီး​၊တွေက ဘာ​ကြောင့်​… ဒီဖုန်း​လေးကို မ​ခေါ်ကြတာလည်း လူ​လေးရယ်​… မိဘ​တွေ လိုချင်​တာ ​ငွေမဟုတ်​ပါဘူး.. .. …
မုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ တစ်သောင်းခွဲတဲ့ ကိုယ်လည်း မယုံလို့ စူးစမ်းချင်လို့ သွားစားကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ
မုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ တစ်သောင်းခွဲတဲ့ ကိုယ်လည်း မယုံလို့ စူးစမ်းချင်လို့ သွားစားကြည့်တာ တကယ်ကြီးတော့် ဒေါ်နှင်းဆီမုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ တစ်သောင်းခွဲတဲ့ Oh my God ကိုယ်လည်း စူးစမ်းချင်လို့ သွားစားကြည့်တာ မယုံလို့ အယ် တကယ်ကြီးတော့်။ ကိုယ်ကြားဖူးတာနဲ့ စာဖူးတာ က ထောင့်ငါးရာတန်လောက်က အများဆုံးကိုး။ နီနီက ခဏခဏ ပြောပြတယ်။ အဲ့ဒီမုန့်ဟင်းခါးက …
မိုးပြည့်ပြည့်မောင် စီးလာသောကား ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်း မိုင်တိုင် ၁၁၄ အရောက်တွက် ရှေ့ဘီးပေါက်ကာ လမ်းဘေးသစ်ပင်အား ဝင်တိုက်မိ
Drama မင်းသမီးလို့ အသိအမှတ် ပြုလောက်အောင် အငို၊ အလွမ်း အခန်းတွေကို ပီပြင်အောင်သရုပ် ဆောင်နိုင်သူက မိုးပြည့်ပြည့်မောင် ပါ။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အငိုမင်းသမီးလေးဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ပိုခဲ့ကြရပါတယ်။ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်ကတော့ သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်တို့ သားအမိဟာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစါခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မိုးပြည့်ပြည့်မောင် စီးလာသော ကားသည် ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်း မိုင်တိုင် …
တစ်လောက.သူသတင်းတွေ မြင်နေပါတယ်.. ခုတော့ ဘယ်လို ဖြစ်တာလည်း စိတ်မကောင်းစရာ.. သမိုင်းလှပြီး ဘဝ မလှခဲ့ရှာ တဲ့ ဓားစန်းရီ.. ကူညီမူလိုအပ် နေပြီး ကူညီကြပါ… ‘ဓားစန်းရီပါတဲ့’ လှည်းတန်းမှာ နိုင်ငံတော်က ပြန်မကြည့်တာကြောင့်တောင်းစားနေရတာပါလို့ဆိုတဲ့ဓားမစန်းရီနဲ့ တွေ့တော့ တတ်နိုင်သလောက်လေး ကူညီပေးခဲ့တယ်… တွေ့ရင်ကူညီပေးကြပါဦးဗျာ…အန်တီဓာတ်ပုံရိုက်မယ်နော်လို့ ခွင့်တောင်းတော့ ရိုက်ပါသားရယ်တဲ့… အန်တီ့အဖြစ်ကို မီဒီယာတချိူ့ လည်းသူတို့မီဒီယာမှာတင်ပေးကြတယ်လို့ပြောတယ်…မီဒီယာတွေကိုကျေးဇူးတင် ပါတယ်တဲ့ဗျာ… “အမေ့လျော့ခံ …
မိန်းမတော်တော်များကအိမ်ထောင်ကျကံကောင်းမကောင်းဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်တွေ့ဖူးတဲ့ မိန်းလေးတွေရှိတယ်။ အိမ်ထောင်မကျခင်က ယောကျာင်္းတွေနဲ့ တယောက်ပီးတယောက်တွဲ။ တစ်ယောက်တောင်မပြတ်သေးဘူး နောက်တစ်ယောက်က အဆင်သင့်။ ဒါမဲ့ အဲ့လိုမိန်းမတော်တော်များများက အိမ်ထောင်ကျကံကောင်းလိုက်ကြတာ။သူတို့ယောင်္ကျားတွေကရွှေတဆင်ဆာကားတွေဘာတွေအပြည့်စုံထားပေးကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးကြတယ်။အမြဲတမ်းတောက်တောက်ပြောင်နေရတယ်။ ဒါမဲ့ တချို့မိန်းမတွေကတော့လည်း အိမ်ထောင်မကျခင်ချစ်သူတစ်ယောက်တည်းအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့တယ်။ သူ့အပေါ်အနှစ်နာခံခဲ့တယ်။သူတို့ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး မပြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့တစ်ယောက်တည်းကိုသာ ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘေးမှာ တခြားယောက်င်္ကျားတွေချစ်ခွင့်ပန်ရင်တောင်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ယောကျာင်္း တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လို့မြင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ မိန်းခလေး အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အခါ တော်တော်များကံဆိုးကြတယ်။ အိမ်ထောင်ကျကံမကောင်းဘူး။ …
တကယ်လိုအပ်နေလို့ အလှူရှင်အများစုက ကျိုက်မရောကို လာနေကြ အလှူရှင်တွေ သတိပြုမိကြဖို့ 😱😱 အရေးကြီးလို့ပါ
ကျိုက်မရော ရွာတွေက ကယ်ဆယ်ရေး တကယ်လိုအပ်နေတာပါ..ဒါကြောင့် အလှူရှင်အများစုက ကျိုက်မရောကို လာနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်. .နောက်နေ့တွေ ကျိုက်မရောလာကြမဲ့အလှူရှင်တွေ သတိပြုမိကြဖို့.. အရေးကြီးတဲ့ အကြံပြုချက်ကလေး (၃) ခု ပေးပါရစေ. (၁) ကျိုက်မရော- မော်လမြိုင် တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့ နတ်စန်းလမ်းမှာ ကားလမ်းတစ်လျှောက် ရေကျော်တာများတဲ့အတွက် ကားတွေ မလွတ်ပါဘူး၊ မုဒုံဘက် ခုနှစ်ခွေကနေ မောင်းကြဖို့လိုပါမယ် (၂) …
ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ခိုင်းစားခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ၁၄ နှစ် နဲ့၁၇ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ မ၀ါနဲ့ မပန်(ရုပ်သံ)
ချစ်ခင်ရတဲ့ စာရှုသူတို့ ခင်ဗျာ.. ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ကျဆုံး ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေ မှုရဲ့ ဒဏ်ကို ပြည်သူတွေဟာ လိမ့်နေအောင် ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာကို ရှာကြရပါတော့တယ်..။အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွေနည်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ကနေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရှိနိုင်မယ်ထင်တဲ့ တိုင်းပြည်ကို တရားဝင်ရော တရားမဝင်ရော သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ အားလုံးဟာ သမာအာဇီဝ နဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်ချင်ပေမယ့် …